Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.1 Hordhac
Cilmi-baarayaasha oo baranaya soomaliyeyaashu ma weydiin karaan su'aalo, sidaas darteed ayaa lagu qasbay in ay isku dayaan inay bartaan kufadhiyada iyagoo eegaya dabeecadooda. Cilmi-baadhayaasha wax bara bini-aadamka, dhanka kale, way fududahay: jawaab-celiyeyaashu way ku hadli karaan. La hadalka dadka waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah cilmi baaris bulsheed hore, waxaana filayaa inay mustaqbalka noqon doonto.
Cilmi-baarista bulshada, la hadalka dadku waxay caadi ahaan qaadataa laba nooc: sahammo iyo waraysiyo qoto dheer. Qormadaani, cilmi baarista iyadoo la adeegsanayo sahan waxay ku lug leedahay qorista nidaamsan ee tiro badan oo ka mid ah kaqeybgaleyaasha, su'aalaha aadka u qaabaysan, iyo isticmaalka hababka tirakoobka ee ka-qaybgalayaasha ka soo qaybgalayaasha dad weyne. Cilmi-baarista iyadoo la adeegsanayo wareysiyo qoto dheer, dhanka kale, guud ahaan waxay ku lug leedahay tiro yar oo kaqeybgalayaasha ah, sheekooyin qaabaysan, iyo natiijooyin ku saabsan tayada, tayada qeexidda ee kaqeybgalayaasha. Sahaminta iyo waraysiyada qoto dheer ayaa ah labada waji oo awood leh, laakiin baaritaanno badan ayaa saameyn ku yeeshay isbedelka laga soo bilaabo da'da dijitaalka. Sidaa darteed, cutubkan, waxaan diiradda saari doonaa cilmi baarista.
Sida aan ku soo bandhigi doono cutubkan, da'da dijitaal waxay abuureysaa fursado badan oo xiiso leh ee cilmi baarayaasha sahanka si ay u ururiyaan xogta si dhakhso ah iyo raqiis ah, si aad u waydiiso noocyada kala duwan ee su'aalaha, iyo in la xoojiyo qiimaha xogta sahanka ee ilaha xogta waaweyn. Fikradda ah in cilmi baaris lagu beddeli karo isbeddel tignoolaji ah maaha mid cusub, si kastaba ha ahaatee. Qiyaastii 1970, isbeddel la mid ah ayaa la socday iyada oo la raacayo tiknoolaji isgaarsiineed oo kala duwan: telefoonka. Nasiib wanaag, fahamka sida telefoonka loo baddalay baaritaanka sahanku wuxuu naga caawin karaa in aan qiyaasno sida da'da dijitaal u baddali doonto cilmi baarista.
Cilmibaadhista cilmi-baarista, sida aynu maanta u aqoonsanno, wuxuu bilaabay 1930-yadii. Inta lagu jiro xilliga ugu horeeya ee cilmi-baadhistan, cilmi-baarayaashu waxay si aan kala sooc lahayn u tijaabin lahaayeen aagagga juqraafiyeed (sida magaalooyinka waawayn) kadibna u safraan meelahaas si ay ula kulmaan sheekooyinka fool-ka-foolka ah ee lala yeesho dadka si aan kala sooc lahayn loo soocay. Kadibna, horumarinta tiknoolajiyada - isweydaarsiga baahsan ee telefoonada gudaha ee waddamada hodanka ah - ugu dambeyntii waxay keeneen marxaladda labaad ee baaritaanka sahan. Marxaladan labaad waxay ku kala duwanayd labadaba sida dadka loo baaray iyo sida wada sheekeysigu u dhacay. Marxaladda labaad, halkii ay ka soo qayb gali lahaayeen qoysaska degaannada juqraafi, cilmi baarayaashu waxay si aan kala sooc lahayn u adeegsadeen lambarrada taleefanka habka loo yaqaan dialing digit random . Halkii aad u safri lahayd si aad dad ula hadasho wajiga, cilmi-baarayaasha halkii ay ugu yeeri lahaayeen telefoonka. Kuwani waxay u eg yihiin isbeddel sahlan oo yaryar, laakiin waxay sameeyeen cilmi-baadhis degdeg ah, ka raqiisan, iyo is-beddelo badan. Marka laga soo tago xoojinta, isbeddelladan ayaa sidoo kale muran ka dhashay sababtoo ah cilmi-baarayaal badan ayaa ka walaacsan in nidaamyadan cusub ee tijaabinta iyo wareysiyada ay soo bandhigi karaan noocyo kala duwan. Laakiin ugu dambeyntii, ka dib shaqooyin badan, cilmi baarayaashu waxay qiyaaseen sidii loo ururin lahaa xogta si habboon u isticmaalaya adeegsashada telefoonka aan kala sooc lahayn iyo wareysiyada telefoonka. Sidaa daraadeed, iyada oo la ogaado sida loo guuleysto kaabayaasha farsamada ee bulshada, cilmi-baarayaashu waxay awood u yeesheen in ay casriyeeyaan sida ay u sameeyeen cilmi-baaris.
Hadda, horumarinta tiknoolajiyada kale-da 'digital age-ah ayaa ugu dambaynta keenaysa marxaladda saddexaad ee cilmi baarista. Kala-guurka waxaa lagu wadaa qayb ka mid ah darajada tartiib-tartiibka ah ee marxaladaha labaad (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Tusaale ahaan, sababo farsamo iyo bulsho oo kala duwan, sicirka aan saldhigga ahayn - taas oo ah, saamiga dadka la baaray ee aan ka qaybgalin sahaminta - ayaa sii kordhayay sanado badan (National Research Council 2013) . Isbedelada mustaqbalka fog waxay ka dhigan tahay in heerka sicir la'aanta aan ka badnaan karin 90% (Kohut et al. 2012) telefoonka caadiga ah (Kohut et al. 2012) .
Dhinaca kale, ku-meel-gaadhka marxaladda saddexaad waxaa sidoo kale qayb ka ah qaybo cusub oo xiiso leh, qaar ka mid ah waxaan ku sharxi doonaa cutubkan. Inkasta oo aan weli la xalinin, waxaan rajeynayaa in marxaladda saddexaad ee cilmi-baaristan ee sahanka lagu sifeyn doono saami-sameynta, wareysiyada kumbiyuutarka lagu maamulo, iyo isku-xirnaanta baaritaannada ilaha xogta (Jaantus 3.1).
Jaantus 3.1: Sadex Eras oo Daraasad Siyaasadeed ah oo ku Salaysan Groves (2011)
Xilligii kowaad Saamaynta sifeynta aagga Waji ka waji Sahan lagu eegayo oo keliya
Wakhtiga labaad Saamaynta sifeynta khadka ah (RDD) Telefoonka Sahan lagu eegayo oo keliya
Wakhtigii saddexaad Saamaynta aan la ixtiraameynin Kombuyuutar-maamul Daraasado ku xiran ilaha xogta waaweyn
Isbedelka u dhexeeya xilli labaad iyo seddexaad ee cilmi baarista daraasadda ayaan si buuxda u jilicsanayn, waxaana jiray doodo fara badan oo ku saabsan sida cilmi-baadhayaashu ay u soconayaan. Marka dib loo eego kala-guurka u dhexeeya xilli-koowaad iyo kan labaad, waxaan qabaa inay jiraan hal arin oo muhiim ah oo naga jira: bilawgu maaha dhammaadka . Taasi waa, markii ugu horeysay ee farsamooyin telefoon oo ku salaysan laba bilood oo hore ayaa ahaa mid aan si fiican u shaqeynin. Laakiin, shaqo adag, cilmi-baarayaashu waxay xaliyeen dhibaatooyinkaas. Tusaale ahaan, cilmi-baarayaashu waxay sameysteen wicitaano khaas ah oo sanado badan ah ka hor Warren Mitofsky iyo Joseph Waksberg ayaa sameeyay qaab-daweyn oo khadka ah oo khadka ah oo leh habab wax ku ool ah oo la taaban karo (Waksberg 1978; ??? ) . Sidaa daraadeed, waa in aynaan isku dhex-dhicin xaaladda hadda jirta ee saddex-marxaladood ee natiijooyinka kama dambaysta ah.
Taariikhda cilmi-baarisyada cilmi-baarista waxay muujineysaa in goobta ay kobcinayso, oo ay ku dhalatay isbeddelka teknolojiyada iyo bulshada. Ma jiro hab lagu joojiyo horumarkaas. Taas bedelkeeda, waa inaan isku afgarannaa, inta aan sii wadno xikmadda laga bilaabo xilli hore, waana habka aan ku qaadan doono cutubkan. Ugu horreyn, waxaan ku doodi doonaa in ilaha xogta ee weyn aysan badali doonin sahaminta iyo in badi ilaha xogta waaweyn ay kordhayaan-ma yaraato - qiimaha sahan (cutubka 3.2). Iyadoo la tixgelinayo dhiirrigelinta, waxaan soo koobayaa qaabka wadarta qaladka sahanka (3.3 qaybta 3.3) ee la sameeyay intii lagu jiray labadii xilli hore ee cilmi-baaris. Nidaamkani wuxuu awood u siinayaa in aan fahanno hababka cusub ee matalaadda- gaar ahaan, shaybaarro aan lahayn ixtimaalka (qaybta 3.4) - iyo habab cusub oo lagu cabbirayo - gaar ahaan siyaabo cusub oo loo waydiiyo su'aalaha jawaabeyaasha (qaybta 3.5). Ugu dambeyntii, waxaan ku sharixi doonaa labo qaab oo cilmi baaris ah oo ku saabsan isku-xirka macluumaadka sahanka si ilaha xogta waaweyn (qaybta 3.6).